Wonke umfazi ufuna ukujonga kakuhle. Ngoko ke, abafazi bazama ukusebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukuze balondoloze ubuhle babo ngokukhawuleza. Ngokomzekelo, ioli yeburdock isetyenziselwa ukuqinisa iinki kunye ne-eyelashes. IBurdock iinki ziba usindiso lokwenene. Emva koko, bonke abafazi bathabatha ukutsala iinki, ezichaphazela isakhiwo seenwele kunye nesikhumba. Yingakho abaninzi bezama ukuqinisa ioli ye-burdock. Kuba iilishi zinceda gqitha kwaye zinonondlo.
Ukusetyenziswa kweoli yeburdock
Ukuze iilishi zakho zihlale zihle kwaye zixakeke, zifuna, ngezikhathi ezithile, ukuba zenze iinkqubo ezahlukeneyo zezonyango. Ioli yeBurdock iya kuba luncedo kuwe kulo mbandela. Leoli yinto engokwemvelo engayi kuba yingozi kumzimba womntu. I-oyile evela kwi-burdock ineempawu ezintle ezifanele zisetyenziswe ukuqinisa umzimba wakho. Siza kuthetha malunga nendlela yokusebenzisa ioli ye-burdock ukuze iimahlo zakho zihlale zibukeka zikhulu.
Ngoko, i-oyile iyimfuneko ukwenzela ukuqinisa iingcambu zeenwele zengcambu. Ukuba ubeka ioli kwiimfumba zakho yonke imihla, ngoko kungekudala baya kuba bunzima kunye ne-silky. Ngendlela, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuxubusha kweoli kufuneka kuhambisane nokusila okulula. Ukwenza oku, sebenzisa iibhululo ezincinci. Ufanele udibanise i-brush enjalo kwi-oyile yommangaliso, uze uqalise ukuxubha iintshontsho zakho kuqala malunga nokukhula kweenwele, uze emva koko. Ngendlela, ukuba uya kuqhuba le nkqubo kwintambama nangokuhlwa, ngoko iimeko zeenki zakho ziza kuphucula nje phambi kwamehlo akho.
Ukupheka ngokusekelwe kwioli yeburdock
Kakade, ukuqinisa iinki ezingasetyenziswa nje kuphela ngeoli ecocekileyo ye-burdock, kodwa kunye nemixube eyahlukeneyo isekelwe kuyo. Umzekelo, ukuba iinwele ziba nzima kwaye zikhuni, ukuba umzimba wakho awufumani i-vitamin A ngokwaneleyo, ungathenga isisombululo seoli ye vithamini uze ungeze amaconsi ambalwa kwioli yakho ye-burdock. Ngendlela, i-vitamin A inako kwaye ayithengi, kuba iqulethwe kwiinqholi ezitsha. Ngako oko, unokwazi ukucoca nje i juti ye-kroti uze udibanise neoli ye-burdock.
Ukuze uthobise iinwele ezikhula emva kokutshatyalaliswa, ungasebenzisa umxube we-burdock kunye neoli yeoli. Ngomxube obangelwayo kufuneka uhlaziye nge-cotton swab uze uyibeke kwiimishiya zakho ngokungapheli kwemizuzu elishumi. Esikhundleni seoli yeoli, i-sea buckthorn kunye neoli ye-fir isetyenziswe.
Ukuba uqaphela ukuba iinwele ezivela kwiilishi zaqala ukuphuma, ngoko kufuneka uqaphele ukwenza umxube we-burdock kunye ne-almond okanye i-peach oil. Ngendlela, xa usebenzisa i-oyile, khumbula ukuba yinto evuselela ngamandla amehlo, ingakumbi ukuba ibuhlungu kakhulu. Ngoko ke, sebenzisa ioli ngenyameko, ukuze kungabikho kwiinyembezi kunye neentlungu.
Ioli yeBurdock ivame ukuxutywa neoli ye-castor. Kule meko, awukwazi kuphela ukondla iinki zakho, kodwa ususe neziqhumiso zokuhlobisa ebusweni bakho. Ngokubambisana, la mafutha amabini anempembelelo. Benza isikhumba, amaqabunga kunye ne-eyelashes enempilo, ukuqinisa nokuzihlambulula.
Xa uthengela ioli ye-burdock, qiniseka ukuba ayidluli. Ukuba ioli ineminyaka engaphezu kweminyaka emibili ubudala, ayiyi kuvelisa umphumo oyifunayo. Ukongezelela, ioli edala, idala idala ukucaphukisa esikhumbeni, ukungakhathazeki njalo njalo.
Ioli yeBurdock isetyenziselwa kakhulu ukuvelisa izimonyo zokwelapha nokuqina. Ukukhuthaza ukukhula okuhlukahlukeneyo kunye nokuvuselela ama-creams zihlala ziqulethe ioli ye-burdock. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuba amaqabunga akho kunye ne-eyelashes ibonakale enempilo, kufuneka ube neoli e-burdock.
Khetha iingubo ngo-Matshi 8: imizekelo ye-couture
Izityalo ezithintekayo zibandakanywa kwincwadi ebomvu
Gweba amanqaku ngexesha lokukhulelwa, izilwanyana zomntu
Inkqubo yokuvuselela iS Spring
Indlela yokugcina isibindi sakho sempilweni
Masiphuphe amaphupha. Ihashe iphupha ntoni?
Yintoni enqwenelekayo ukuthetha nomyeni wakhe ngaphambi komtshato
USarah Bernhard: "Kungakhathaliseki ukuba kwenzekani!"